Bitsibitsika Afghana: Resaka Mojahidinina, Parlemanta & Media · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Novambra 2017 5:21 GMT
Araka ny filazan'ny Yadashtayi az Gharb (fanamarihana avy any Andrefana), niresaka momba ny Mujahedeens tamin'ny fomba ratsy teo anoloan'ny solontenan'ny Mujahedeens sy ny hafa tao amin'ny Parlemanta Afghana (Loya Jigra) Ramatoa Malai Joya. Araka ny filazan'ilay bilaogera:
“Nilaza izy fa nisy olona nanao sorona ny ainy rehefa nobodoin'ireo mpanafika i Afganistana. Hoy koa izy hoe, maro tamin'ireo olona niady sy tafavoaka velona no lasa sembana sy zara raha afa-miaina kanefa lasa mpanankarena ireo mpitarika Mujahedeens ary manana orinasa miafina maromaro ao amin'ny firenena na any ivelany. Tafiditra amin'ny trafika rongony ny sasany amin'izy ireo ary mihoso-drà ny tanan'izy ireo. “
Bilaogera hafa, Farasoye Niko Bad, nizara tantara mitovy amin'izany. Hoy izy:
“Rehefa niresaka momba ny Mujahedeens tsara sy ny Mujahed mpanao heloka bevava izy. Nanomboka nanompa azy sy nandrahona hamono azy na hanolana azy mihitsy aza ny solombavambahoaka maro. Nisy mpakasarin'ny Tooloo nodarohan'ny depiote iray raha niezaka ny haka ny horonantsarin'izany tranga izany.
Afghan Journalism indray miresaka momba ny fomba fitateran'ny media ny fanontaniana mifandraika amin'ny fifandraisan'i Afghanistan & Pakistan. Hoy izy:
“Ny tati-baovao tamin'ny Alakamisy mikasika ny kabarin'i Karzai no ohatra vao haingana amin'ny fiakaran'ny fifankahalàna (na dia tsy fanahy iniana aza) eo amin'ny olona sy ny governemantany amin'ny fampielezana ny marina tapany sy ny famoahana vaovao diso. Raha fehezina, te hanonona ny filoha Afgàna aho ary hamela ny mpamaky hanapa-kevitra izay nolazainy: Nandritra ny fitantanan'ny Taliban, miandry mandritra ny tontolo andro ao amin'ny biraon'ny sampana fitsikilovana Pakistaney ny minisitra mba hihaona amin'ny lehiben'ny (tafika) iray.
Ity no ampahany “ratsy” tamin'ny kabary izay nalaina tamin'ny ankamaroan'ny sampam-baovao sy ny gazety, raha toa kosa ny sisa izay tiako hambara fohifohy dia navahana. Izany hoe: mankasitraka isika ankehitriny ary ho velom-pankasitrahana an'ireo rahalahy Pakistaney na dia afaka an-jato taonany aza noho ny fanohanana sy ny fanampiana nomen'izy ireo ho antsika nandritra ny 25 taona. Firenena rahalahintsika i Pakistan. Nalahelo be aho noho ny horohorontany (8 Oktobra) tany Pakistan izay nahatsapako fa nitranga tao amin'ny fireneko manokana (Afghanistan) ny faharavàna. Mba hampihenana ny fanaintainana sy ny alahelon'ny Pakistaney, nanolotra fanampiana rehetra izay azo atao isika. Manana helikoptera efatra fotsiny isika, izay nalefa tany Pakistan mba hanampy azy ireo. “